Momba anay - Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd.
Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2006, dia manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana ary ny varotra amin'ny sehatry ny fiarovana. Manolotra ny vokatra CCTV rehetra izahay ho an'ny mpanjifa manerantany, ao anatin'izany ny Smart Face Detection / Face IDH.265 NVR range, Smart IP Camera, Smart 5 IN 1 XVR, HD Cameras matihanina sy avo lenta, WiFi Camera ary WiFi NVR Kit, 4G / Wifi Solar Camera . Amin'ny maha-mpanamboatra azy any Shina, Aopvision dia natokana hanome teknolojia avo lenta, vokatra avo lenta ary serivisy matihanina.
Aopvision dia manana fanangonana talenta R&D, ary nampiasa traikefa an-taonany maro ho an'ny indostrian'ny fiarovana any Shina. Ambonin'ireny dia ataovy Aopvision ho sehatra teknolojia avo lenta. Ny orinasa dia mandray ny rafitra fitantanana orinasa mandroso sy ny rafitra OA maoderina, ary mamorona fomba famokarana mahia telo amin'ny iray miaraka amin'ny TQC, TPS ary TPM.
Aopvision dia mampihatra mafy ny fitantanana QC amin'ny fahombiazan'ny asa sy ny vidiny ambany koa. Noho izany, nahazo taratasy fanamarinana momba ny kalitao iraisam-pirenena ISO2008 sy mari-pahaizana momba ny fitantanana tontolo iainana iraisam-pirenena ISO14001 izahay; Ankoatr'izay, ny vokatra andian-dahatsoratra dia ankatoavin'ny RoHS, CE ary mari-pankasitrahana FCC, manolotra mpanjifa kalitao sy vokatra mifaninana ary tsara aorian'ny serivisy fivarotana.
Ny vokatra Aopvision dia ampiharina betsaka amin'ny orinasa, tranobe manan-tsaina, trano fandraisam-bahiny sy tsena ary trano fonenana sns. Amin'izao fotoana izao, ny vokatray dia ekena am-pahombiazana any Amerika, Canada, Japan, Britain, Germany ary firenena sy faritra hafa.
Aopvision dia manizingizina amin'ny hevitra momba ny fampandrosoana iraisana sy mirindra, ary manolo-tena hampilamina sy hilamina ny fiainan'ny olona eran'izao tontolo izao.
"Azo antoka kokoa, manan-tsaina kokoa", iraka ataontsika io!
Ny Aopvision dia hanohy hitazona ny fanahin'ny orinasa "Professionalization Dedication Concentration", hanohy hivoatra, hizaha ary hamorona eo amin'ny sehatry ny fanaraha-maso horonantsary, hamokarana vokatra avo lenta sy lafo vidy ary hamorona lanja lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa.
Hevitra momba ny fitantanana: manaraka ny "tsena aloha izahay, ny mpanjifa aloha", ny varotra ary ny mpanjifa no hevi-dehibe amin'ny fitantanana. Niasa mafy izahay nanatsara ny vokatra sy nanatsara ny serivisinay. Niaraka taminao foana izahay.
Rafitra fanatsarana kalitao: nametraka ivon-toerana avo lenta sy foibe fanatsarana toetra izahay ary mametraka rafitra fanaraha-maso kalitao henjana. Ny vokatra rehetra dia iharan'ny fitsapana azo antoka henjana sy amin'ny fanandramana ny tontolo iainana alohan'ny fandefasana. Mampihatra tanteraka ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2015 izahay ary nahazo fanamarinana.
Rafitra iarovana ny tontolo iainana: nahazo mari-pahaizana ISO14001 izahay, hahazoana antoka fa tsy misy fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana ny orinasa. Nahazo mari-pankasitrahana ROHS izahay, ny vokatra sy ny singa vokarintsika rehetra dia namboarina araka ny fenitra ROHS.
1-Panasonic advance NPM SMT Line, haingam-pandeha, miampy Yamaha SMT LINE
2-Mametraha rivotra misidina avo lenta
Tsipika fivoriambe 3-tsipika
Ekipa 4-vondrona R&D misy olona 50 miady hevitra
Fahafahana Qty isam-bolana: 200K an'ny Cameras, 30K-50K an'ny DVR / NVR